8 Maitiro muRetail Software Technology | Martech Zone
Iyo indasitiri yekutengesa indasitiri hombe inoita akawanda mabasa uye zviitiko. Mune ino posvo, isu tichakurukura nezve epamusoro maitiro mune zvekutengesa software. Pasina kumirira zvakawanda, ngatifambei takananga kumaitiro.
Sarudzo dzekubhadhara - Dhijitari zvikwama uye akasiyana ekubhadhara magedhi anowedzera iko kuchinjika kune online kubhadhara. Vatengesi vanowana nzira iri nyore asi yakachengeteka yekusangana nezvinodiwa zvekubhadhara zvevatengi. Mune tsika dzechinyakare, mari chete ndiyo yaibvumidzwa senzira yekubhadhara yaigadzira kuoma kwekuchengetedza, gare gare kushandiswa kwemakadhi ekubhengi nemakadhi echikwereti kwakatanga izvo zvaive nyore asi nzira yakawanda uye inopedza nguva. Munguva dzazvino mabhiriji ese ayambuka uye vanhu vatanga kusarudza ma digital wallet kuti vachengete mari yavo uye vabhadhare. Izvi zvinobatsira kuti mhanyisa kubhadharira vatengi uye panguva imwechete, vatengesi vanowana mabhenefiti emitengo yakaderera yekutengesa.
Kuziva Zvemagariro - Vatengi vanogara vanonetsekana nezve zviitiko zvemagariro, nekuziva kunoitwa nekambani. Vatengesi vanogara vari pasi pekumanikidzwa kuti vaite zviitiko zvinofadza eco. Iwo mabhizinesi zvikamu anosarudza kudzikisa kushandiswa kwepurasitiki, makemikari, dehwe, furs, uye zvimwe zvakawanda kuti ugare wakasununguka. Mazhinji mabhizinesi mayunitsi anosarudza zvigadzirwa zvinogadziriswa zvigadzirwa kubatsira zvisikwa.
Kufanotaura Ongororo - Iyo indasitiri yekutengesa inoshanda neakawanda data uye yave data-inotyairwa. Iyo inofungidzirwa ramangwana dhata inogona kubatsira mabhizinesi kuita sarudzo dzakangwara uye kuongorora dzakasiyana nzvimbo senge idzo dzekutenga nemishumo, maitiro evatengi, maitiro, uye kuongorora kwavo rwendo. Iyo miitiro yemafambiro evatengi uye zviitiko zvinogona kubatsira kudzikisa izvo zvisiri-zvekutenga zvigadzirwa nekusimudzira zvimwe zvekutengesa nekutarisa kune zvavanofarira uye zvavanofarira. Iwo anoderedzwa mapatani evatengesi anogona zvakare kunzwisiswa uye kutenga kunogona kuitwa zvinoenderana kuti uwane yakanakisa kupihwa.
Web App Applications - Nzvimbo-inoziva bhurawuza-yakavakirwa zvikumbiro hazvidi nharembozha yekushandisa kurodha pasi uye iri mhinduro hombe sezvo ichipa hwakawanda hwakawanda hwebhenefiti senge nyore kugadzirisa, rutsigiro rwakafanana rwehwaro, hushamwari hurongwa, unoteerera zvakanyanya, haudi yepamusoro internet, yega yega inoshandiswa zviri nyore nemajini ekutsvaga uye zvakare inotsigira zviziviso.
chakagadzirwa Intelligence - Smart mameseji uye marobhoti anobatsira mabhizimusi nekuchengetedza rese data rezvemari uye masystem aya anokwanisa kupa zvakasarudzika kurudziro, kutsvaga zvigadzirwa zvakafanira, nyore kufamba, zvinodiwa nevatengi, nezvimwe zvakawanda.
Rubatsiro rweIzwi - Vatengi vanoshandisa vabatsiri vezwi murwendo rwavo rwekutenga pamhepo neAmazon Alexa, google kumba, Siri nevamwe vazhinji sevaya vari mumota-shamwari uye vabatsiri vepamba. Vatengesi vari kusarudza mune iyi tekinoroji uye yekutengesa-based izwi kutsvaga. Vabatsiri vezwi vanowanzo kuve vakavimbika sezvo ivo vari nekukurumidza uye nyore kuwana vachipa isina-maoko nzira yekushanda. Izvi zvinouyawo nemipimo yekutambudzika muchizvarwa chekutsvaga mhedzisiro, kuomesa kubhurawuza nekuda kweakakura runyorwa rwe mitsva yekutsvaga uye nevamwe vashoma.
Inventory Kuchengeta - Vatengesi vanogara vachida kubata akawanda mabasa pamwe chete uye vanoda manejimendi maturusi uye zvimwe zvakawanda maficha ekugadzirisa uye kuramba uchiteedzera kuverenga. Zvazvino maficha anowanikwa mune yekutengesa software anosanganisira otomatiki ekupa cheni, manejimendi masystem, kutengesa kufungidzira, stock chinhu kuona, chaiyo-nguva analytics, uye zvimwe zvakawanda. Zvese izvi zvinogona kubatsira kudzikamisa yakawanda mutoro wevatengesi nekugadzirisa yakawanda zviitiko online.
Kutsvaga kwekuona - Kutarisa kwekutsvaga ndeimwezve inoitisa bhizinesi mukana iyo yakaunzwa munguva dzichangopfuura. Iyo yekutsvaga yekutsvaga inobvumira vashandisi kuti vawane nyore zvigadzirwa zvavakange vachitsvaga kubvira kwenguva refu. Izvi zvinounza vashandisi padhuze nekutenga sezvo mitsva yekutsvaga ichinyatsoenderana nezvinodiwa.
Aya aive mashoma emhando yepamusoro maitiro mune zvekutengesa software uye neshanduko muhunyanzvi uye kugadzirisa, mamwe maitiro anoramba achiwedzerwa muindasitiri. Kune runyorwa rwepamusoro-soro uye akaverengwa zvekutengesa software matekinoroji, tarisa Techimply.
Tags: browser-based applicationkuverenga kwekutsvagakubhadhara maripredictive analyticschitorochitoro aichitoro softwarechitoro software maitirochitoro tekinoroji maitirozvitengesi maitirokuziva vanhukuonekwa kunoonekarubatsiro rwezwiwebhu kunyorera